March 2020 – Kalfadhi
Waa kuwee musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka Koonfur-Galbeed ee khudbadahooda maanta la dhegeystay?
March 31, 2020 March 31, 2020 Hassan Istiila
Ajandihii kulanka maanta ee xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee maamulka Koonfur Galbeed, ayaa ahaa dhageysiga khudbadaha musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka. Kulanka waxaa uu ku furmay 95 mudane, midna kama maqneen xildhibaannada Baarlamaanka oo guud ahaan ka kooban 95 xildhibaan. Musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed ee ah shan musharax, ayaa jeediyey khudbadahooda musharaxnimo, kuwaas oo kala ahaa. 1: Xildhibaan Cali Saciid Fiqi oo u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka 2: Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nuur oo doonaya xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka. 1: Xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed oo u taagan xilka guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka…
‪Maxey ka wada hadleen guddiga Baarlamaanka ee sharciga doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka Qaranka? ‬
March 31, 2020 Hassan Istiila
Guddi-wadajirka ku meel-gaarka ah ee soo diyaarinta xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka Qaranka ayaa oo kulamo is-daba joog ah ka wada Magaalada ayaa kulan kula yeeshay xarruunta Guddoonka iyo Guddiyadda ee Villa Hargeysa Guddiga Madaxa-Banaan ee Doorashooyinka Qaranka. Kulanka waxaa Shir guddoominaayay guddoomiyaha Guddi-wadajirka ku meel-gaarka ah ee soo diyaarinta xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka Qaranka Madane Ibraahim Isaaq Yarroow. Kulanka uu guddiga la yeeshay guddiga Madaxa-banaan ee doorashooyinka qarankaa ayaa ahaa latashiyo iyo isxog-wareysi ku aadan 4ta xeer ee guddiga loo soo xilsaaray in ay kasoo shaqeeyaan ee kala ah. I.…
March 30, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Wadajirka ah ee dhameystirka Xeerka Doorashooyinka Qaranka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa gellinkii dambe ee shalay kulan la qaatay Mas’uliyiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Guddiga iyo Wasaaradda ayaa ka wada hadlay arrimaha Muhiimka u ah dhameystirka Xeerka Doorashooyinka Qaranka oo ay kamid yihiin afarta Xeer ee loo xil-saaray Guddiga Wadajirka ah,kuwaas oo kala ah. Xeerka Deegaameeynta Kuraasta. Xeerka xaqiijinta Qoondada Haweenka. Xeerka Doorashada xubnaha labada Aqal ee kasoo jeeda Gobolladda Waqooyi(Soomaaliland). Xeerka xaquuqda metelaada gobolka Banaadir. Xubnaha Guddigaan ayaa horey waxaa ay ula kumeen Guddiga madaxa…
Madaxtooyada JFS waxa ay ka tacsiyeynaysaa geerida xanuunka leh ee Guddoomiyihii Gobolka Nugaal Marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gu’ Jir) oo u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qaraxii bahalnimada ahaa ee caawa ka dhacay magaalada Garoowe. Qoraal uu faafiya Agaasimaha Warfaafinta madaxtooyada Qaranka Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khadka taleefanka kula xiriiray Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani uu geerida marxuumka uga tacsiyeeyay bulshada iyo Maamulka Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna Alle caafimaad deg-deg ah u weydiiyay dhammaan dadkii…
March 29, 2020 Hassan Istiila
Maamulka Koonfur-Galbeed ayaa isku diyaarinaya qabashada doorashada guddoonka Baarlamaanka ee dowlad-gobolleedka maamulkaasi, kaddib markii dhawaan lasoo dhisay xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee maamulkaasi. Magaalada Beydhabo, waxaa maanta ka soconaya is-diiwaangallinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka maamulkaasi. Shalay guddiga doorashada goddoonka baarlamaanka Koonfur galbeed ayaa soo saaray jadwalka murashxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur galbeed, waxaana wali jirin murrashax wali si rasmi ah isugu soo sharaxay xilkaasi. Maalinta berito ah waxaa ku eg is diiwaangalinta murashaxiinta guddoonka baarlamaanka Koonfur galbeed, waxaana 1-da April la filayaa in ay…
Wasaaradda Waxbarashada ee Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib ula wareegi doonto dugsiga sare ee 15 May oo ay gacanta ku hayaan ergada waxbarashada Masaarida ee Soomaaliya. Ergada Masaarida ayaa dugsigaasi waxa ay gacanta ku hayeen tan iyo sanadkii 2015-kii markaas oo maamulkiisa lagu wareejiyay. Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahday iskuulka si loogu badallo dugsiga tababbarka macalalimiinta gabdhaha, kaas oo soo saari doona hablaha macalimiinta ka noqon doona dugsiyada hoose iyo dhexe ee waddanka. Wasiirka Waxbarashada Cabdillahi Goodax Barre oo wareysi siiyay BBC-da ayaa…
Xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay amar lagu raali gelinayo Itoobiya in lagu xiray Iskuulkii 15 May ee dowlada Masar maamuleysay
March 28, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in amarka lagu xirayo Iskuulkan uu yahay mid lagu raalli gelinayo dowladda Itoobiya. Mudane Mahad, ayaa ka hadlay go’aanka dowladda Soomaaliya kula wareegeyso Iskuulka 15 May ee ku yaalla degmada Warta Nabadda (Ex Wardhiigley), waxaana Iskuulkan maamula Guddiga waxbarashada iyo Tacliinta dalka Masar. “Amar lagu raali gelinayo Itoobiya oo lagu xiray Iskuulkii 15 May ee dowlada Masar maamuleysay, ardayda dhigatana lacag la’aan wax lagu bari jiray! Horay hadii Qalbi Dhagax loogu dhiibay. Dekadihii dalka lagu wareejiyay. Qaraarkii…
Madaxweyne Farmaajo “Dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad ee badqabkooda.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay mideeyaan cududdooda iyo awooddooda, una istaagaan sidii ay dalkooda uga samata-bixin lahaayeen duruufaha caafimaad ee caabuqa Coronavirus uu dhaxal siiyey dalal badan oo caalamka ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay si weyn uga murugoodeen dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ugu geeriyooday cudurkan, isaga oo Alle caafimaad deg-deg ah u weydiiyey dadka kale ee bukaanka ah. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si gaar ah ducada ugu xusay Raiisul Wasaarihii Hore ee Soomaaliya Mudane…
Xildhibaan Mahad Salaad “Madaxweyne Ahmed Qoor-Qoor, waa nin dhiirran oo isku wadi kara dadka iyo deeggaanka Galmudug”
March 26, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo magaalada Dhuusamareen ee xarunta maamulka Galmudug kula kulmay, madaxweynaha cusub ee maamulkaasi, ayaa sheegay in Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor uu yahay madaxwyne isku wadi kara dadka iyo deeggaanka Galmudug. Xildhibaanka ayaa horay uga mid ahaa siyaasiyiintii kasoo horjeeday, hanaankii lagu doortay madaxweyne Axmed, waxaana hadda ay u muuqataa in aragtida xildhibaanka ay wax iska bedeleen. Mahad Salaad, ayaa sheegay in madaxweynaha ay kala shaqeyn doonaan arrimaha dib-u-heshiisiinta iyo in dadka reer Galmudug ay is-qaataan. “Madaxweynaha waxaa uu ku…
Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyay heerka ay mareyso deynta cafinta
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bogaadiyey guusha shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ka gaareen barnaamijka Deyn Cafinta ayaa soo dhaweeyey heerka sare ee uu gaaray xiriirika iskaashi ee DFS iyo Hay’adaha Maaliyadeed ee Adduunka. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda ay ka go’an tahay sii amba-qaadidda dadaallada horumarinta dhaqaalaha dalka, waxa ayna Soomaaliya qorsheynaysaa in ay xubin ka noqoto Hay’adda Dammaanad-Qaadka Caalamiga ah (Multi-Lateral Investment Guarantee Agency), oo ah tallaabo kale oo xoojineysa in dalkeenna ay ku soo hirtaan malgashadeyaasha caalamiga iyagoo aan walwal ka qabin masiirka…